Ihe ị ga-ahụ na Rotterdam | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Rotterdam
Markthal | Onyonyo | Provast
Onye ọ bụla nke na-aga njem na Holland n’oge ezumike ma gaa Rotterdam na nke mbụ ya ga-achọpụta na ọ bụ obodo nwere ikuku ụlọ ọrụ mmepụta ihe, dị iche na obodo ndị mejupụtara obodo ndị ọzọ. Nke a bụ n'ihi na mgbe ogbunigwe ahụ ọ tara na Mee 1940 n'oge Agha IIwa nke Abụọ, ọtụtụ ụlọ ochie ya lara n'iyi na njedebe nke esemokwu ahụ, a ghaghị iwu obodo ọhụrụ.
Maka ụfọdụ ndị mmadụ, nke a pụtara ọghọm nke amara ndị obodo Dutch nwere, wuru na ndabere nke usoro canal ahụ nke na-ahụkarị mba ahụ, mana maka ndị ọzọ ọ kpatara obodo pụrụ iche nwere ụlọ ọgbara ọhụrụ nke mere ihe owuwu na Rotterdam. dị oke mkpa, ọbụlagodi site na ndị njem nleta.
Taa, Rotterdam abụrụla obodo ejiji n'etiti ndị Dutch na ndị njem, ndị na-ewepụta ohere iji leta ya n'okporo ụzọ na-esote Amsterdam na Delft mara mma. Ndị a bụ ụfọdụ ebe ị ga-ahụ na Rotterdam n'oge nleta gị maka njem a na-agaghị echefu echefu gaa mba tulip.
2 Ngosi ihe mgbe ochie na Rotterdam
3 Ọdụ ụgbọ mmiri Rotterdam
5 Ublọ ndị a na-ehi n’ubi
6 Halllọ nzukọ obodo na ụka nke San Lorenzo
7 Stationgbọ oloko
Ọ bụ otu n'ime ụlọ kachasị ewu ewu na obodo. O nwere mpaghara buru ibu dika ama egwuregwu bọọlụ na façed ya semicircular ya na obere windo nwere akụkụ anọ na-adọrọ uche gaa n'ichetara nke akpukponu inyinya. Ime Dutch ka Arno Coenen mara mma n'ime ya, onye sere mkpụrụ osisi, okooko osisi na ụmụ ahụhụ maka emume ahụ.
Zọ mbata nke Markthal Rotterdam bụ n'efu ma karịa ebe obibi ụlọ ahịa ọdịnala nwere ngwaahịa ọhụrụ, ọ nwekwara ụlọ nri na ọbụlagodi ụlọ akwụkwọ nri. Ebe dị mma iji nwaa gastronomy nke mpaghara ahụ yana site n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Mana ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị, ị nwere ike ịga otu n’ime ụlọ mmanya ndị dị na okporo ámá Pannekoekstraat mgbe niile, ije ije ije nkeji ise, nke ndị mmadụ juputara na ya ma ọrụ gachaa.
Ngosi ihe mgbe ochie na Rotterdam
Foto | Bolọ ihe ngosi Boijmans Van Beuningen
Ọzọ mma nke obodo a bụ ya ngosi nka. Ijlọ ihe ngosi Boijmans (Museumpark, 18-20), ihe ngosi nka kacha ochie na Netherlands, bụ ihe achọrọ. nke mara mma n'ime dịka ọ dị n'èzí n'ihi nka ya deco façade na nnukwu ogige ndị dị n'ime, yana nchịkọta ihe osise, eserese na ihe dị iche iche.
Otu n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mma na Netherlands bụ Dutch Photographic Museum. A na-ekesa ihe ngosi ya n'ọtụtụ ala yana n'ala ụlọ ị nwere ike ịmụ banyere akụkọ ihe mere eme nke foto na mmekọrịta na ụzọ mmụta.
N'aka nke ọzọ, Rotterdam nwere otu n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mkpa na ụwa dịka ọdụ ụgbọ mmiri bụ otu n'ime ndị kasị ibu. N'ime ya ị nwere ike ịhụ site na okike nke ụgbọ ahịa na ụgbọ mmiri ndị agha na uwe ndị agha mmiri ma ọ bụ ihe metụtara igodo.
Ọdụ ụgbọ mmiri Rotterdam
N'ikwu okwu banyere ọdụ ụgbọ mmiri, mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri ochie nke obodo ahụ abụrụla ebe nzukọ a ma ama nyere ebe ọnụnọ na ụlọ mmanya nwere ọtụtụ ikuku ị ga-a aụ. Ọtụtụ narị afọ gara aga, n'otu ebe a, ndụ azụmahịa bara ọgaranya malitere, nke ụfọdụ ụgbọ mmiri akụkọ ihe mere eme nwere ike ịhụ taa ebe a.
Ọdụ ụgbọ mmiri ọzọ ama ama na Rotterdam bụ Europort, ebe ị nwere ike ịga na isi ụlọ ọrụ mbụ nke Holland America Line, ebe ọtụtụ ndị Dutch ji ụgbọ mmiri iji banye na nrọ ndị America.
Nnọọ nso na ọdụ ụgbọ mmiri ochie nke obodo ahụ bụ Witte Huis, ihe owuwu ụlọ na-eju anya na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu nke a na-ewere dị ka ụlọ elu Europe mbụ nke nwere mita 43 dị elu na ala 10. Ihu ọcha ya na nhazi ya bụ otu n'ime mmadụ ole na ole lanarịrị ọdachi nke agha ahụ.
Ublọ ndị a na-ehi n’ubi
Onye ozo di nso na Witte Huis bu ebe ozo nke njem nlegharị anya nke Rotterdam: ulo ama ama ama ama ma obu Kijk-Kubus. Anyị na-eche ihu otu n'ime ihe ndị kachasị ọhụrụ na nke mgbanwe na usoro nke imewe, ọrụ Dutchman Piet Blom na 1984. Ha bụ ụlọ ndị yiri cube na-agbachiri ihu ka e wee nwee ike ịhụ ha n'akụkụ niile. Ugbu a ị nwere ike ịga leta naanị otu ebe ndị ọzọ bi. Ha dị na agbata obi Oude Haven nke dịpụrụ adịpụ na mpụga Marktal.
Halllọ nzukọ obodo na ụka nke San Lorenzo
Ma echela na Rotterdam nwere ụlọ ọgbara ọhụrụ. N'agbanyeghị agha ahụ, ụfọdụ ụlọ lanarịrị, dị ka ụlọ nzukọ obodo ma ọ bụ ụka Protestant nke San Lorenzo (1449). Datesbọchị mbụ site na 1913 ma wuo ya n'ụdị neo-Renaissance. Iji gaa n'ime ime ya, ị ga-akwụ ụgwọ njegharị na-eduzi na ọfịs ndị njem nleta Rotterdam. N'aka nke ọzọ, a pụkwara ileta ụka. E weghachitere ime ya ka ọ mebie na bọmbụ nke 1940. Thechọ mma ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ mana ogidi nkume ya na elu ụlọ ya na-adọrọ mmasị.
Ọdụ ụgbọ okporo ígwè Rotterdam bụ ihe atụ ọzọ banyere mkpa ọkaibe nke oge a n'obodo. Ọ bụ ezie na e hiwere ya na 2014, ọ ghọworị ihe nnọchianya nke obodo ahụ n'ihi ọdịdị ya nke nwere akụkụ atọ. Agbanyeghị, ọ na-edobe ụfọdụ ihe gara aga dị ka elekere etiti ma ọ bụ leta dị n'ọnụ ụzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Rotterdam » Ihe ị ga-ahụ na Rotterdam
Dị ejiji ndị Mexico
Ihe ị ga-ahụ na Vila Real de Santo Antonio